Isibuyekezo se-African Grand Casino SA | Ibhonasi engu-R300 yamahhala engenayo idiphozi
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-african grand casino
Ibhonasi Lokukwamukela:750% Ibhonasi
110 Ama-Free Spins
I-African Grand Casino ingelinye lamakhasino e-inthanethi amasha emakethe. Ngemuva kokusungulwa ngo-2019, isithathe umhlaba we-iGaming ngesivunguvungu. Isikwazile ukuzakhela idumela eliqinile esikhathini esincane ngokuba nohlu oluhle kakhulu lwemidlalo namaphromoshini amahle adonsa ukunakekela kwabadlali yonke indawo.
Kunesici sengxoxo ebukhoma esitholakala kubadlali 24/7. Ngalolu sizo lwamakhasimende, kusho ukuthi uma abadlali benezinkinga, zingaxazululwa ngokushesha. Lokho kuyiphoyinti elihle ngekhasino ngoba kusho ukuthi amakhasimende ahlezi ekwazi ukuxhumana nosizo lwamakhasimende. Bheka ukubukeza kwethu ukuze uthole konke okudingeka ukuthi uyazi mayelana ne-African Grand Casino.
Amakhodi wamabhonasi Welcome ku-African Grand Casino
Uma kukhulunywa ngokuheha abadlali abasha kuzingxenyekazi zabo, amakhasino aku-inthanethi aya ngokuya ngokudala futhi ancintisana kulezi zinsuku.
AMABHONASI OKUKWAMUKELA KA-2020 E-AFRICAN GRAND CASINO
Ikhodi Yebhonasi: WELCOME Abadlali bathola U-150% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R2000 kudiphozithi lokuqala
AMAKHODI EBHONASI YEDIPHOZITHI ENGEKHO E-AFRICAN GRAND CASINO
Kunebhonasi yediphozithi engekho ka-R300 etholakala kubadlali e-African Grand Casino. Inikezwa abadlali uma besebenzisa ikhodi yebhonasi elithi AGSTUNNING ngenkathi bebhalisa.
AMANYE AMAPHROMOSHINI AKHETHEKILE ANIKEZWA YI-AFRICAN GRAND CASINO
Ukuze kunikezwe abadlali amabhonasi ngaso sonke isikhathi beyilunga le-African Grand Casino, ikhasino liqhuba amanye amaphromoshini angeziwe . Lokhu kunikeza abadlali ukheshi obuyiselwe kubo kanye namabhonasi ansuku zonke. Nayi imininingwane yamanye amaphromoshini aqhutshwa yi-African Grand Casino:
AMAKHODI KA-2020 EBHONASI LOKUKWAMUKELA E-AFRICAN GRAND CASINO
Kubuyiselwa u-100% kakheshi kuwe Noma yimaphi amadiphozithi enziwe nge-EFT ayokubuyisela ukheshi uma esetshenziswe ekubhejeni ongawinanga khona. Kunemigomo mayelana nale phromoshini.
Amabhonasi okudiphozitha nsuku zonke Ngosuku ngalunye kunebhonasi yokudiphozitha imali engafani neyezinye izinsuku ezitholakala kubadlali e-African Grand Casino.
INDELA YOKUNGENA NGEMVUME NOKUBHALISA KU-INTHANETHI E-AFRICAN GRAND CASINO
Ayikho enye indlela engabalula kunokungena ngevume e-African Grand Casino. Kulula kakhulu ukuthola inkinobho yokungena ngemvume, itholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwewebhusayithi. Ngemuva kokuchofoza le nkinobho, kuzovela isikrini esisha lapho ungafaka khona imininingwane ye-akhawunti yakho nephasiwedi. Kulula impela futhi akuthathi isikhathi eside. Ngemuva kokungena ngemvume, ungaqala ukudlala imidlalo eminingi etholakala e-African Grand.
Nakho futhi kulula ukubhalisela i-akhawunti e-African Grand Casino. Inkinobho yokubhalisa itholakala eceleni kwenkinobho yokungena ngemvume. Mane uchofoze inkinobho, bese uhanjiswa esikrinini sokubhalisa. Lapho kudingeka ukuthi ufake imininingwane yakho bese uba yilugu le-African Grand Casino elikwazi ukudlala. Akuthathi isikhathi eside ukukwenza futhi kuyinqubo elula ukuyiqonda.
IMIDLALO YEKHASINO ONGAYIDLALA KU-INTHANETHI E-AFRICAN GRAND CASINO
Kunezinhlobo eziningi zemishini yokugembula yevidiyo etholakala kubadlali e-African Grand Casino. I-Real Time Gaming ihlinzeka ngayonke imidlalo. Lokhu kuqinisekisa ukuthi imidlalo enikezwayo isezingeni eliphezulu kanye nokuthi iyathembeka. Abadlali bazojabula ngemidlalo abangayikhetha lapha, nakuba bekungaba ngcono uma bukunabanye abaqhikizi besofthiwe.
I-African Grand Casino inemidlalo eminingi yesizumbulu semali ekhula njalo ongayidlala. Le midlalo ibandakanya i-Aztec’s Millions kanye ne-Megasaurus. Konke lokhu kuqoqeka kube yimidlalo emihle engakhethwa ngabadlali.
Uhlu lwemidlalo yetafula e-African Grand Casino aluluhle kakhulu. Imbalwa imidlalo ongayikhetha, kodwa amagama ayinhloko afakiwe. I-Blackjack, i-roulette namanye afakiwe. Kumane nje kuwukuthi azikho izinhlobo eziningi zemidlalo ngakho-ke kwehlisa izingabunjalo kancane. Ayikho imidlalo yekhasino obukhoma, okungenye into engeyinhle.
Abadlali bayakwazi ukufinyelela imidlalo ye-poker yevidyio eminingi e-African Grand Casino. I-Jacks or Better, i-Loose Deuces kanye ne-Deuces Wild ngeminye yemidlalo ye-poker yevidiyo engadlalwa. Kukhuphula inani lemidlalo kancane futhi kunikeza abadlali uhlu oluluhle lwemidlalo ye-poker yevidiyo.
I-AFRICAN GRAND CASINO IQHATHANISEKA KANJANI KUSELULA?
Ukudlala e-African Grand Casino ngeselula kuyinto enhle kakhulu. Isayithi livula ngokushesha. Lokhu kungenxa yomsebenze oweniziwe okuhlela kahle iwebhusayithi yeselula. Imeniyu lilula ukufinyelela kanye nokusebenzisa. Izithombe ezikuskrini zinciphiswe ubukhulu kahle ukuqinisekisa ukuthi zilula ukubona nokuthi aziphazamisekanga.
I-African Grand Casino ingasetshenziswa kunoma yiyiphi idivayisi yeselula. Njengoba isebenza ne-Windows Mobile kanye ne-Blackberry, futhi nezinhlelo ezijwayelekile ze-Apple kanye ne-Android, ivumela inani elikhulu labadlali ukuthi bayijabulele isayithi. Uhlu lwemidlalo kusayithi lucishe luphelele, okungenye ibhonasi yesayithi yeselula.
NGINGAKWAZI UKUDAWUNILODA I-AFRICAN GRAND CASINO ESELULENI YAMI?
Abadlali bebekwazi ukudawuniloda isofthiwe eyengeziwe ye-African Grand Casino kodwa leso sici sasuswa.
IZINDLELA EZIVUNYELWE ZOKUKHIPHA IMALI E-AFRICAN GRAND CASINO
Dlulisa ngebhange Yebo Izinsuku zokusebenza ezingu-3–10
IZINDLELA EZIVUNYELWE ZOKUDIPHOZITHA IMALI E-AFRICAN GRAND CASINO
INKAMPANE YE-AFRICAN GRAND CASINO NEMINININGWANE YOKUXHUMANA
IMINININGWANE EJWAYELEKILE YE-AFRICAN GRAND CASINO
USIZO LWAMAKHASIMENDE E-AFRICAN GRAND CASINO
Isungulwe: 2019 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: 08000 645 53
Umphathi ngu: Endorphins PTE Ltd I-imeyili: [email protected]
Ilayisense ngeyase: Curacao Ingxoxo esheshayo: Yebo
Ulobo Ongakwazi Ukuludawuniloda: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha ukuvakashela isayithi
ABANTU ASEBAKE BAWINA IKHASINO NOMKLOMELO E-AFRICAN GRAND CASINO
Okwamanje alukho ulwazi mayelana nabantu abasanda kuwina e-African Grand Casino
UBUHLE NOBUBI BE-AFRICAN GRAND CASINO
Kunohlu oluhle lwemishini yokugembula yevidiyo
Ibhonasi lokukwamukela lihle kakhulu futhi lisebenza kumadiphozithi amahlanu
Kunezinhlobo eziningi ze-poker yevidiyo ongazikhetha
Usizo lwamakhasimende luhle kakhulu
Imbalwa imidlalo yetafula
Zimbalwa izindlela zokubhenka
Ingabe i-African Grand Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
I-African Grand Casino inelayisense ekhishwa nguhulumeni wase-Curacao. Lokhu kukwenza kube semthethweni ukusebenzisa isayithi eNingizimu Afrika
Ngiyikhipha kanjani imali ku-African Grand Casino?
Esigabeni se-akhawunti e-African Grand Casino, abadlali bayakwazi ukubona lokho abavunyelwe ukukukhipha Inqubo lokukhipha imali lenziwa ngokudlulisa imali ngebhange, okuyiyona kuphela indlela yokukhipha imali evunyelwe i-African Grand Casino.
Yini i-African Grand Casino?
I-African Grand Casino ingelinye lamakhasino e-inthanethi amasha emakethe. Isungulwe ngo-2019, futhi isizakhele idumela elihle esikhathini esincane. Ngamabhonasi amakhulu kanye nemishini eminingi yokugembula, yakhelwe abadlali abathanda ukudlala imishini yokugembula.
Ubani umnikazi we-African Grand Casino?
I-African Grand Casino ngeka-Endorphins PTE Ltd futhi iphethwe yibona.
Ingabe i-African Grand Casino inezici zokubheja ezemidlalo?
I-African Grand Casino ayinikezi izici zokubheja ezemidlalo okwamanje.
Ingabe i-African Grand Casino inikela ngohlelo lwabantu ababaluleke kakhulu(VIP)?
I-African Grand Casino inikeza abadlali uhlelo lwe-VIP. Lapho, abadlali bangathola izinzuzo ezingatholakali kwabanye. Lezi zinzuzo zibandakanya amabhonasi ayengeziwe kanye namaphromoshini futhi nekhono lokuthola imikhawulo ephezulu yokukhipha imali.
Ziyini izidingo zokubheja e-African Grand Casino ukuze ukhiphe imali?
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali e-African Grand Casino zithi kumele udlale ibhonasi lakho izikhathi ezingu-30 Lokho kusho ukuthi uma ibhonasi lomdlali lingu-R100, kuyomele abheje u-R3,000 ukuze izidingo zokubheja ukuze akhiphe imali zaneliseke.